Ushicilelo > UVielhuber uDavid
Ngokwe-§ 5 TMG
Ifowuni: + 49 (0) 89 21 540 01 42
Ifeksi: + 49 (0) 89 21 544 59 1
Umgangatho werhafu edityanisiweyo
Inombolo yokuchonga irhafu yokuthengisa ngokungqinelana ne-§ 27 yomthetho werhafu yokuthengisa: i-DE 284 595 977
Ukusonjululwa kweembambano kwi-EU
IKhomishini yaseYurophu ibonelela ngeqonga lokusombulula iingxabano kwi-Intanethi (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr . Unokufumana idilesi ye-imeyile kwisaziso esisemthethweni apha ngasentla.
Ukuhlawulwa kwembambano yabathengi / ibhodi yokulamla jikelele
Asizimiselanga okanye sinyanzelekile ukuba sithathe inxaxheba kwiinkqubo zokulungiswa kweembambano phambi kwebhodi yomlamli wabathengi.
Njengomboneleli ngenkonzo, sinoxanduva lomxholo wethu kula maphepha ngokuhambelana nomthetho ngokubanzi ngokweCandelo 7 (1) loMthetho waseJamani weTelemedia. Ngokwe-§§ 8 ukuya kwi-10 TMG, njengomboneleli ngenkonzo, asinyanzelekanga ukuba sibeke iliso ekusetyenzisweni okanye ekugcinweni kolwazi lomntu wesithathu okanye ukuphanda iimeko ezibonisa isenzo esingekho mthethweni.
Uxanduva lokususa okanye ukuvimba ukusetyenziswa kolwazi ngokungqinelana nemithetho ngokubanzi kuhlala kungachaphazeleki. Uxanduva malunga noku lunokwenzeka kuphela kwinqanaba apho sinokuthi sazi ngolwaphulo mthetho oluthile. Nje ukuba sazi ngokwaphula umthetho oku, siya kuwususa lo mxholo kwangoko.
Isibonelelo sethu siqulathe amakhonkco kwiiwebhusayithi zangaphandle zomntu ongaphezulu kwakhe ngaphandle komxholo. Asinakho ke ukwamkela naliphi na ityala kulo mxholo weqela lesithathu. Umboneleli okanye umqhubi wamaphepha uhlala enoxanduva lomxholo wamaphepha adibeneyo. Amaphepha adityanisiweyo akhangelwe ukuba kukho ulwaphulo mthetho ngexesha ababenxibelelana ngalo. Akukho mxholo ufunyanwa ngokungekho mthethweni ngexesha lokudalwa kwekhonkco.
Ukubeka iliso ngokusisigxina kumxholo wamaphepha adibeneyo akukho ngqiqweni ngaphandle kobungqina obubambekayo bokwaphulwa komthetho. Ukuba siyazi ngolwaphulo mthetho, siya kususa amakhonkco ngokukhawuleza.
Umxholo kunye nokusebenza kula maphepha adalwe ngumqhubi wewebhusayithi aphantsi komthetho welungelo lokushicilela waseJamani. Ukuphinda-phinda, ukuhambisa, ukuhambisa kunye naluphi na uhlobo lokuxhaphaza ngaphandle kwemida yomthetho wamalungelo obunini kufuna imvume ebhaliweyo yombhali okanye umdali. Ukhuphelo kunye neekopi zale webhusayithi zivumeleke kuphela ukuba zisetyenziselwe bucala, kungasetyenziselwa urhwebo.
Ngaphandle kokuba umxholo kule ndawo awuzange wenziwe ngumsebenzisi, amalungelo okushicilela amaqela esithathu ayaqwalaselwa. Imixholo ethile yamaqela esithathu iphawulwe ngoluhlobo. Ukuba kuya kufuneka wazi ukuba kukho ulwaphulo-mthetho, sicela usazise ngokufanelekileyo. Nje ukuba sazi ngokwaphula umthetho, siya kuwususa ngoko nangoko umxholo.